[တရားဝင်] Mac အတွက် iPhone ကို Data Recovery: Recovery ကိုအားဖျက်သိမ်းပြီး iPhone ကိုဒေတာများ, Mac ပေါ်မှာ
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - Mac အတွက် iPhone ကို Data Recovery
ကမ္ဘာ့ 1st, Mac က iPhone နှင့် iPad ဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ။
သုံးနည်းလမ်းများနှင့်အတူ Mac ပေါ်တွင် iPhone ကိုဒေတာ Recover ။
စသည်တို့ကိုအဆက်အသွယ်များ, SMS, မှတ်စုများ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ, ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယို, recover နိုင်
နောက်ဆုံးပေါ် iPhone နှင့် Mac OS နဲ့အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iPhone ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေး (Mac) Mac အတွက်အသုံးပြုသူများအပျောက် iPhone ကိုဒေတာ retrieve လုပ်ဖို့များအတွက်အစွမ်းထက်နှင့်ထိရောက်သောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
မတော်တဆသင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကိုဖျက်ပစ်? ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ iPhone ကိုဖဲ့? စိုးရိမ်ထိတ်လန်မလိုအပ်ပါ! dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ (Mac က), သင့် Mac iPhone ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေးကျွမ်းကျင်သူ, သင်သည်အစဉ်အမြဲရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်ထင်သောအဖိုးတန် data တွေကို recover ကိုကူညီဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကို Mac iPhone ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုအများအပြားဘုံကးအဘို့အအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကြောင့် iOS ကို update ကိုမှဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ဒေတာ
သင်သည်သင်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ပေါ်မှာရှိသမျှကိုဖျက်လိုက်ပါသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ဒေတာ scan ဤ Mac က iPhone အတွက် data တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူကိုသုံးပါနှင့်အခမဲ့များအတွက်အသေးစိတ် preview နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ iCloud backup ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး extract လိုပါသလား? Mac အတွက်ဤသည် iPhone ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသငျသညျအခမဲ့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကြိုးစားပါနှင့်သင်သိပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကဤ Mac က iPhone အတွက် data တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူ software ကိုမစဉ် Apple ကလူတွေ iTunes ကို backup ဖိုင်ကိုများ၏ content ဖတ်ရှုဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး, ထိုသို့အခမဲ့ဖွင့်ကိုငါသိ၏။
ဒါဟာ Mac က iPhone အတွက် data တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူ tool ကိုထက်ပိုပါတယ်။ သင်စကင်ရလဒ်အတွက်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာသငျသညျထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်တဲ့အခါ, သင်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာ preview နဲ့ print ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ One-click နှိပ်ပြီးအလုပ်ပါပဲ။
Mac အတွက်ဤသည် iPhone ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသငျသညျ 18 ဖိုင်အမျိုးအစားများကိုမှတက်, အဆက်အသွယ်မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, မှတ်စုများ, သမိုင်းကိုပဌနာ, သတိပေးချက်များ, WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ, နှင့်ပိုပြီးများကဲ့သို့ဒေတာကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ် iPhone မှာ 7, အိုင်ပက် Pro ကို, ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းက iPhone 4, iPad နဲ့ 1 ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်နေပါစေ, ဒီ Mac အတွက် iPhone ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေး iPhone, iPad နှင့် iPod touch နဲ့မော်ဒယ်များအားလုံးနှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သည်။
Mac အတွက်ဤသည် iPhone ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုလုံးဝကိုဖတ်ရှုသာဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်ဒါမှမဟုတ် backup ဖိုင်ကိုအတွက်မဆိုဒေတာ, စောင့်ရှောက်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို ယူ. အလေးအနက်ထားအကောင့်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲပြုလုပ်ရယူနိုင်သူကိုသာလူတစ်ဦးပါပဲ။
3 နဲ့ Mac က iPhone Data Recovery နည်းလမ်းများ
scan ကို iPhone,
တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ဖျက်ပစ် data တွေကို preview နှင့် recover ဤ Mac က iPhone အတွက် data တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူဆော့ဗ်ဝဲနဲ့သင့်ရဲ့ iPhone scan ။
iTunes ကို Extract
Exract preview နှင့်ရွေးချယ် အကယ်. သင်သည် Mac ပေါ်တွင်သင်၏ iTunes ကို backup ဖိုင်တွေကနေလိုချင်တာတွေကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်။
preview နှင့်ရွေးချယ်ကနေသင်လိုချင်တာတစ်ခုခုကို item recover လုပ်ဖို့ Download နှင့်သင့် iCloud backup ဖိုင်ကို extract လုပ်ပါ။
ဒီ Mac အတွက် iPhone ကို Data Recovery Software များနှင့်အတူပိုမိုသော
ရရှိနိုင် preview: နာလန်ထူမီ, သငျသညျဓါတ်ပုံ, ဗီဒီယို, မက်ဆေ့ခ်ျများ, အဆက်အသွယ်မှတ်စုများ, စသည်တို့ကို preview နိုင်ပါတယ်
Flexible ပြန်လည်ထူထောင်ရေး: အားလုံးသို့မဟုတ်အချို့ပစ္စည်းများကိုဆယ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ကဆုံးဖြတ်။
သို့ပြန်သွားရန် Device ကိုမှ data: တိုက်ရိုက်တည်ဆဲ data တွေကို overwrite လုပ်နိုင်တဲ့မရှိဘဲသင်၏ iPhone ကိုအပေါ်ပြန်လည်ကောင်းမွန် data တွေကိုသိမ်းဆည်းပါ။
100% ကို Safe အာမခံ: တစ်ဦးကဖတ်ရန်အတွက်သာ Mac က iPhone အတွက် data တွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူ tool ကို, ကသင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာဘာမှစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်မည်မဟုတ်။
အသုံးပြုနည်းလွယ်ကူသော: အဘယ်သူမျှမကကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုလူတိုင်း Mac အတွက်ဒီ iPhone ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသုံးနိုငျ, မေးတယ်။
Windows ကို 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP ကို; Mac OS X မှာ 10.11 (အယ်လ်ဗိုလ်ကြီး), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, ဒါမှမဟုတ် 10.6
ထားသော 2,573 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
iPhone ပေါ်မှာခေါ်ရန်သမိုင်း Recover လုပ်နည်း (iPhone ကို 6s Plus အား / 6s ပါဝငျ)
iPhone ကို (iPhone ကို 6s Plus အားပါဝငျ) မှပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံ Recover လုပ်နည်း
အားဖျက်သိမ်းပြီး iPhone ကို 6s အပေါ်ဗီဒီယို (Plus အား) /6(Plus အား) / 5s / 5c /5/ 4s /4Recover လုပ်နည်း
6s /6/ 5s / 5c /5/ 4s /4/ 3GS iPhone ပေါ်မှာ WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းလုပ်နည်း
ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့မဟုတ်အားဖျက်သိမ်းပြီး iPhone ကိုဆက်သွယ်ရန် Recover လုပ်နည်း
iPhone ကို (ပါဝငျ iPhone ကို 6s Plus အား) မှ iMessage Recover လုပ်နည်း